UPhononongo lweKobo Clara HD: Ixabiso, iiNqaku, kunye neeMpawu | Zonke iReaders
UNacho Morató | | I-eReaders, Kobo
UKobo usandula ukwazisa umfundi omtsha wokufunda i UKobo Clara HD. Isifundi se-6 esifunda nge- € 129, esichukumisayo, esikhanyisiweyo kunye neComfortLight. (Ungayithenga nge Amazon nangaphakathi Fnac) Ngexabiso kunye neempawu zisikhumbuza ngeKobo Glo HD yakudala. Ngaphandle kwamathandabuzo uClara uza kulwa ne-Kindle Paperwhite.
I-Kobo Clara HD, Imiselwe ukuba ibe yeyona nto iphambili kwinkampani ngenxa yexabiso layo lomgangatho. Okwangoku inkampani ine-4 ereaders Kobo Aura, Kobo Clara HD, Kobo Aura H2O kunye UKobo Aura One. I-Aura yeyona isisiseko kunye ne-H2O ibe sisiphelo esiphakamileyo kwi-6 ″ kunye nesiphelo esinye esine-7,8 spect enomtsalane. Kodwa uClara ubekwe kwicandelo elichazwe kakuhle yiPhepha leWhite kwaye yile yabafundi abaneempawu ezifanayo nesiphelo esiphakamileyo kodwa benoyilo olunobunewunewu kunye nezinto eziqhelekileyo kodwa ngexabiso elikhuphisanayo. Namhlanje ezo € 130 ngumda wexabiso ukusuka apha kukho ukutsiba okubonakalayo kuluhlu oluphezulu.
3 Iimpawu kunye nenkangeleko
4 Isoftware yeKobo, iPokotho kunye neBluetooth
6 Igalari yezithombe
6, touch screen
E inki Ileta HD.
Isigqibo: HD / 300 dpi
Ikhanyisiwe. Uhlobo lweGeniG ComfortLight Pro System
X x 159,6 110 8,35 mm
Imemori yangaphakathi ye-8 GB
I-Wi-Fi 802.11 b / g / n / iMicro-USB
Izibuko leMicroUSB linikwe amandla
Ukuzimela: iiveki ezininzi
Ingaphakathi lichanekile, mhlawumbi kancinci kancinci bendilindele umboniso onamandla ngakumbi. Kuyinyani ukuba oku akuchaphazeli iimpawu zesixhobo kodwa ndihlala ndithanda ukuba ii-brand zikhathalele zonke iinkcukacha zemveliso yazo kunye nendlela ezizisa ngayo kuthi yenye yazo. Ayinanto yakwenza nokupakishwa komntakwabo omdala, uKobo Aura One, olumke kakhulu.
Iimpawu kunye nenkangeleko
Ngobungakanani beklasikhi ye-6 ″ kunye nokujonga okungacacanga. Kukhululekile ukuphatha nokuphatha. I-bezel ibonakala kwiscreen, ayisiyiyo iflethi screen kunye nezakhelo njengoko kusenzeka kwiAura One.
Inxalenye engemva, ngokubambelela kakuhle, ijongeka ngathi ibunjiwe, hayi ukubambelela kwi-Aura One. Ke sinamava okufunda amnandi kakhulu
Ineqhosha elinye, iqhosha lamandla ecaleni kwe-USB encinci. Yiyo kuphela iqhosha kwisixhobo. Ayinawo amaqhosha okujika iphepha kwaye ayinayo indawo ye-microSD slot nokuba. Kum, i-8Gb yayo yokugcina ingaphezulu ngokwaneleyo. Kodwa ndiye ndafunda abantu abajonga ukuba bayasilela.
Isoftware yeKobo, iPokotho kunye neBluetooth
Emva kokuvavanya i-Kobo, inkqubo yayo yokusebenza, iimenyu, yonke into ilula kakhulu, inobuhlobo, yomelele kwaye isebenza kakuhle. Siyazi ukuba iza nePokotho edityanisiweyo, iMozilla's Read it Kamva esivumela ukuba sithumele amanqaku ewebhu kwithebhulethi okanye kwi-smartphone kwaye siyifunde kamva kwisifundo sethu.
Nangona bekukho amarhe okuba iza kubandakanya iBluetooth kunye neencwadi zokumamela zinokumanyelwa, andilufumananga olu khetho. Lihlazo, kuba inyani kukuba iya kuba yinto enomdla kakhulu.
Ngaphandle kwamathandabuzo, uKobo ukhuphele ngaphandle umfundleli omkhulu wecandelo ebelifuneka kwaye ngaphambili ligutyungelwe yiGlo HD. Kubonakala ngathi sesinye sezixhobo ezilungileyo, ukuba ayisiyiyo eyona ilungileyo yokufikelela kwi- € 130 esinokuyifumana namhlanje.
Iya kuba ngumgangatho xa sithetha ngabafundi abafunda ngokugqwesileyo ngokomgangatho wexabiso / ixabiso. Ngokuqinisekileyo ndingacebisa nabani na ofuna ukufunda kakuhle.
Uphengululo lwe: UNacho Morató
- Ukudityaniswa kwepokotho
- ayinayo indawo ye-SD
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » UKobo Clara HD uphononongo
Kwisifundo sabafundi ndiyaqala ukucinga ukuba zincinci kakhulu iindaba. Ubone enye, ubonile konke. Abo banezikrini ezinkulu okanye uyilo olwahlukileyo (njenge-Oasis) ndibamba ingqalelo yam ...
Kodwa phakathi kwale kunye nephepha elimhlophe elimbalwa umahluko endilibonayo. Kukho ewe kodwa bambalwa kwaye kwinqanaba lobuhle ... nangaphantsi.
Molo Javi. Ewe, azikho iindaba ezinomdla, kwaye andicingi ukuba ziya kubakho. Abafundayo zizixhobo ezenzelwe umsebenzi othile, ukufunda, kwaye ndicinga ukuba lifikile ixesha lokuba bayenze kakuhle.
Olona tshintsho lubaluleke kakhulu olunokuza kukusebenzisa imibala eink, kodwa andazi ukuba iyakuze ize na.
Yintoni enye ongayicela? Gcina ukhumbule ukuba azikho ithebhulethi.
Ndicinga ukuba umahluko unokuphuculwa kakhulu. Ndiyathetha imvelaphi yezikrini ze-E Ink. Kusemnyama kakhulu. Kungenxa yoko le nto ukukhanya kongezwa, ukuze kubonakale kumhlophe kodwa kwabafundi abangayiphathiyo (ngakumbi abo banescreen esikhulu) ungayibona loo mvelaphi, isengwevu kakhulu. Ewe kunjalo, ukuba emva kweminyaka emininzi kangaka i-Ink ayikhange isombulule, kuyakubakho iingxaki zobuchwephesha ezibalulekileyo.
Umbala liphupha lam elikhulu, kodwa bendilinde iminyaka emininzi kangaka kwaye ndinokudana okuninzi: i-brigestone, iTriton, iLiquavista, i-Irx Innovations, njl njl. Andiqinisekanga ngomgangatho wezikrini zabo zemibala kodwa ke, bathi bazakuyiphucula. Kukwakho nemiboniso ye-ACEP evela kwi-E Ink… mhlawumbi kule minyaka ilishumi izayo.
Ndicinga ukuba kunganomdla xa bongeze iipaneli zelanga kubafundi. Ngamandla amancinci asetyenziswa zezi zikrini, ndicinga ukuba kuya kuba nakho ukwenza ukuba abafundi bazanele ngokwaneleyo. Ndicinga ukuba iingxaki ziya kuba lixabiso kwaye mhlawumbi kubuchwephesha. Inkampani yaseFinland yacebisa ngayo kwiminyaka embalwa edlulileyo, andazi ukuba yayiphi. Ushiye ikhonkco kwividiyo, ngendlela umntu awayefunda ngayo enescreen seTriton (umbala we-E Ink): https://www.youtube.com/watch?v=UbyCkJ3f4UI
Ewe, inkqubela phambili icacile ... ukuba akukho nto ingako yokuyila kwi-hardware, ukuyila kwisoftware.
Ndingathanda ngaphezulu kwe-6 ″ ngobukhulu obufanayo ... kwaye ukuze ibe luhlobo 🙂
Ndiyayithanda i-kobo kodwa i-syncing evela kwiAmazon kwaye indithumelele incwadi nge-imeyile evela kwiCaliber ndiyathanda ngakumbi ...
Kwisoftware, eyona nto inomdla endiyibonileyo zizixhobo ze-Android kuba ungasebenzisa inani elikhulu lezicelo. Kwenzeka ntoni ukuba kubonakala kum ngathi kufana nokubulala iimpukane ngokudubula ngemipu. Faka u-facebook ukuze wabelane ngesivumelwano? Twitter?
Eyona nto inomdla kukwenza ukuba uyifunde kamva okanye umsebenzi ofanayo, ube nepokotho kuso nasiphi na isixhobo.
kodwa andiboni ukuba umntu ofundayo kufuneka abe nezinto ezininzi ezisebenzayo. Ndicacile ukuba kufuneka bayiphucule loo nto, zombini kwizixhobo zekhompyutha nakwisoftware, kodwa andiboni ukuba kuya kubakho into ephazamisayo eza kusothusa.
UNacho ndikunika "yedwa": Uhambo lohlobo luye lwanyamalala kwiphepha Amazon.com
Andazi nokuba yeyomzuzwana kodwa ndiyayithandabuza. Ukuba ukungabikho kwesitokhwe kuya kuqhubeka ukubonakala kwaye, kuyo nayiphi na imeko, inokuba yinto efana "nokufumaneka kwiiveki ezi-2-3". Ivumba njengokukhumbula imveliso.
Inyani yile yokuba ukuba iqinisekisiwe, akukho nto indothusayo. Zange ndenze ngqondo ngolu hlobo kwaye ndingaphantsi emva kokuvela kohambo.
Kubonakala ngathi licebo elilungileyo kunye nezimvo zakho ukuthenga iKobo Clara .. I-euro ezingama-130 njengoko usazi, emva kokuba neengxaki ezithile ngeTangus.
Intlekele ... isoftware ayisebenzi, kuya kufuneka ndiyicime kathathu ukuze ndifunde amaphepha amathathu ngokulandelelana, iindawo ezibuthathaka zesikrini azisabeli xa uchukunyiswa ... Nokuba ndenza ntoni kwakhona, ayisebenzi ayinamsebenzi. Kuye kwafuneka ndiyeke ukufunda iinoveli ezinamaphepha angama-800 kuba ngalo lonke ixesha ndiyifunda iya kwiphepha lama-221, kwaye akukho ndlela yakuya phambili. Isoftware e-Crappy? Izinto ezingcolileyo?
Uya kundixelela. Ukubulisa.
Molweni, ayiqhelekanga le nto uyithethayo. Ngaba sele uqhagamshele inkxaso yekobo ukubona ukuba sisiphi isisombululo abakunika sona kwaye ukuba bayayilungisa, bayitshintshe, njl.
Molo, kulungile ndinikwe i-Kobo Clara hd kwaye ndiyayithanda yonke into. Yi-eBook yam yokuqala, kodwa kukho into endingayithandiyo kwaphela. Kucotha kakhulu, ngalo lonke ixesha ndijika iphepha okanye ndithatha naliphi na inyathelo, kuthatha uKobo inkulungwane ukuyenza. Into endingayaziyo kukuba yinto eqhelekileyo kwi-eBook okanye yeyam efike ineziphene.
UFrancisco valera bengoechea sitsho
Akukho namnye kuhlalutyo oluxeliweyo ukuze ufunde incwadi eyakho, umzekelo uDon Quixote, kuya kufuneka ufumane isatifikethi se-ADE esikhutshwe yiAdobe. Ngale ndlela, iAdobe iyazifaka kwikhompyuter yakho kwaye igunyazise ukuba uyifunde. Ngokwenene? Kubonakala kum ngathi kukungena ngaphakathi kangangokuba ndiye ndawubuyisa nje. Kwaye ngendlela, kukho indlela yokujikeleza iqhaga
isiphelo: ukuba awufuni ukuba likhoboka leAmazon, thenga uKobo kwaye uya kuba ngomnye wabanye.
Phendula i-francisco valera bengoechea
Molo uFrancisco, kukuba umba we-DRM awungowomfundi. AyisiyiHardware ebeka kuyo kodwa i-ebook, abo bazicwangcisayo bazithengise.
Akukho sidingo okanye tsiba ukhuseleko. Kwiincwadi ezinje ngeDon Quixote zininzi iintlobo ze-DRM ezingahlawulelwayo kwi-Intanethi.
Mholweni. Uhlalutyo olulungileyo kodwa ndinombuzo, ukubona ukuba ungawusombulula na. Ndiyaqonda ukuba ukujika kwephepha kufuneka kube semngceleni wesikrini kuba ukuba senziwe embindini, umzekelo, into oyifumanayo kukrwelela izivakalisi. Kwaye ukuba kunjalo, ngaba kunokwenzeka ukuba ungayikhubazi? Kuba kum kubalulekile ukuba ukwazi ukujika iphepha uye naphi na kwiscreen. Ndiqhele uSony wam kwaye ndiyifumana iyasebenza.
Ndiyabonga kakhulu kwangaphambili
Ndiyithengile kwaye ayikuxhasi ukutshintsha isithuba somgca. Xa ndithetha nenkonzo yabathengi bandixelela ukuba baqinisekisa kuphela iincwadi abazithengayo kwiqonga labo.
Ndingumfundi ofunda ixesha elide kwaye ndithenge inani elikhulu leencwadi ekuhambeni kwexesha. Ewe, bandixelela ukuba iincwadi zam ziyi-epub kwaye zisebenzisa ifomathi ye-epub 3.
Kodwa intengiso yakhe ithi ufunda epub. Impendulo yakho kukuba ukungakwazi ukutshintsha isithuba somgca akubalulekanga. Ndiqala ngomsindo kwasekuqaleni
Ndiyabona ukuba kuphela abo kwiqonga labo baqinisekisa ukuba kuyinto eqhelekileyo. Kuba abazi ukuba abo uphuma kubo babekiwe kakubi, inokuba yingxaki onayo.Ukhe wazama enye i-epub?
Ndifunde i-epub yesiqhelo noClara kwaye andafumana ngxaki.
Emva kwamava am ndicebisa ukuba ungathengi i-Kobo, ABANAYO INKONZO YOBUGCISA EMVA KWEMINYAKA EMIBINI YOKWENZA ISIQINISEKISO NOKUBA ISIPHUMO SOKUKUPHOSA, ABAKUSOLULI NANTSI INTO. Ndicinga ukuba kubalulekile ukuba unolu lwazi. Imayini ukusuka ngo-2017 phantse i-euro ezingama-200 kwaye ndiyilahle ... eyona nto imbi kakhulu kukuba ndicinga ukuba yiplagi yokutshaja ... isisithukuthezi kodwa ayinamsebenzi emva kwesiqinisekiso sokuba nantoni na ayikukhonzi9
Yi-eBook yam yokuqala nangona indiphoxile ngokunxulumene nexabiso layo.
* Isoftware icotha kakhulu.
Iinkqubo zekobo zeselfowuni kunye nekhompyuter azivumelanisi ngokufanelekileyo nesixhobo. Kuphela ziincwadi ezithengiweyo kwiqonga lakho ezibonwayo kwaye ukuba uqhubela phambili kufundo alubonakali kwisixhobo.
* Akukho nethiwekhi ye-wifi ifunyenwe kangangeentsuku. Ndiye ndaphinda ndayiqala phantsi amaxesha amaninzi kodwa ihlala injalo. Ndiza kuya evenkileni ukuze ndibone ukuba sisiphi isisombululo abasicebisayo kum.
2017 "Uphengululo lwe-Kindle Oasis 7
Ukufunda kweAmazon Prime, ireyithi entsha yeefayili zeencwadi?